XOG: Madaxda Dawladda PL & Isimadda oo kulan deg deg ah ka yeeshay Xoreynta gobalka Sool, si cadna iskugu raacay… – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA XOG: Madaxda Dawladda PL & Isimadda oo kulan deg deg ah ka yeeshay Xoreynta gobalka Sool, si cadna iskugu raacay…
Posted on May 18, 2018 by admin | 0 Comments
Wararka laga helayo Aqalka Madaxtooyada ee dawladda Puntland ayaa sheegaya in ay kulamo khaas ah oo saxaafadda laga dheereeyey yeesheen Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland & Isimadda Puntland, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda gobalada Sool, Sanaag & Cayn, loogana hadlayay xoreynta dhulka maqan ee Puntland.
Madaxda dawladda Puntland ayaa u sheegay Isimada in ay ka go’an tahay in lasoo afjaro duulaamada qar iska xoornimo ee Somaliland ay ku soo qaaday gobaladaas, gaar ahaana hadda gobalka Sool, loona baahan yahay in ay garab iyo gaashaanba u noqdaan guutooyinka ciidamada ah ee hadda qaba amarka dagaalka.
Madaxda dawladdu waxay u sheegeen Isimada in looga baahan yahay in ay wacyigalinta qeyb ka noqdaan, dadkana ay ku baraarujiyaan in difaaca dalku yahay mid waajib ku ah cid kasta oo ku nool mandiqada Puntland.
Isimada ayaa uga mahadceliyey Madaxweyne Gaas & kuxigeenkiisa Camey go`aan dhiiran ee ay ku dhaqaaqeen iyo amarka dagaalka ee ah in lasoo afjaro kooxahan soo duulay, oo mudo dheer ay Isimadu ku baaqayeen in dagaal lagu qaado.
Isimaddu waxay balan qaadeen in ay garab iyo gaashaanba u noqon doonaan ciidamadooda, waxayna sheegeen in ay ugu yeeri doonaan shacabku in ay qaataan doorkooda, waxayna ku amaaneen dawladda go’aanka dhiiran ee ay qaateen waqtigii loo baahnaa.
Waxgaradkan waxay kaloo sheegeen in ay garab istaagayaan ciidamada oo ay laftirkoodu galayaan jiidaha dagaalka, si lays kaga dhiciyo cadowga soo duulay, waxayna shegeen in cid kasta oo taageertay duulaankaas aysan ka mid aheyn shacabka Puntland, loona baahan yahay in ay dawladdu siyaasad cad ka yeelato.
Madaxda dawladda Puntland ayaa bilaabay kulamo khaas ah oo ay la yeelanayaan Bulshada rayidka ah, Isimadda, Waxgaradka, Siyaasiinta & Madaxdii hore oo ay ka wada hadlayaan taageerida howlgalka xoreynta dhulka maqan ee Puntland oo fursadda ugu weyn ee ay maanta haysato Puntland.
Filed in: WARARKA MAANTA, XOGAHA QARSOON